Maroon 5, Ozuna, Gladys Knight, ụwa nke atọ kwupụtara maka Curaçao North Sea Jazz 2019
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Maroon 5, Ozuna, Gladys Knight, ụwa nke atọ kwupụtara maka Curaçao North Sea Jazz 2019
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Curacao • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Curaçao kwupụtara aha mbụ maka mbipụta nke iteghete nke Curaçao North Sea Jazz Festival. N'afọ a Maroon 5, Ozuna, Gladys Knight na ụwa nke atọ ga-apụta n'ememe ahụ na World Trade Center na Piscadera Bay. Nzukọ a ka na-arụsi ọrụ ike na ndị ọzọ na-ese ihe ga-ekwuputa na ọnwa ndị na-abịanụ. Ememme a na-emepe na Tọzdee, 29 Ọgọstụ na egwu egwu nke Havana D'Primera na Aymee Nuviola.
Otu egwu America bụ Maroon 5 ereela ihe karịrị nde album 20 wee nweta onyinye atọ nke Grammy. Mbido mbụ ha, Songs About Jane, ghọrọ nnukwu ihe ịga nke ọma na onye nọchiri ya, Ọ gaghị adị anya tupu oge eruo, ọ ka mma. Hits were aplenty: Ike Iku ume, Nke a Lovehụnanya, Ọ Ga-hụrụ n'anya, Na-eme Ka M Na-eche, Eme Ka Jagger featuring Christina Aguilera… ndepụta na-aga. E wepụtara album ọhụrụ ha, Red Pill Bad, na njedebe nke 2017 ma nwee ọnụọgụ 1 kụrụ otu Likemụ agbọghọ Dị Ka Gị, nke gosipụtara Cardi B. Jenụwarị gara aga a, Maroon 5 nwere nsọpụrụ nke ịrụ n'oge Super Bowl Half-Time Show.
Juan Carlos Ozuna Rosado, onye aha ya ozuna mara, bụ Puerto Rican reggaeton na Latin ọnyà na-agụ egwu. Na mbido 2016, Ozuna bịara bụrụ onye a ma ama maka ọdịdị ya na otu La Ocasión, na-esi n'ike gaa ike kemgbe ahụ. O weputara album abuo rue ugbua; Odisea nke 2017 na Aura nke 2018, ma merie Billboard Music Awards na Latin Latin Music Awards atọ, n'etiti ndị ọzọ. Na 2017, o mere ihe nkiri izizi ya na ihe nkiri ahụ Que León.
Afọ isii ọ malitere izizi na Curaçao 'Eze Nwanyị nke Mkpụrụ Obi' Gladys Knight na-alaghachi n'àgwàetiti ahụ. Ya na ndị otu ya bụ Pips ọ nwere nnukwu ahụmịhe, dịka m nụrụ ya site na osisi vaịn, Midnight Train To Georgia, na Baby Don't Change Your mind, in the 1960s and 1970s. Ná ngwụsị nke 1980s Knight malitere ọrụ naanị ya wee chọta ihe ịga nke ọma na James Bond aha egwu ikikere igbu. Egwuru egwu ohuru ya, ebe obi m di, ka eweputara n’aho 2014 ma burukwa ezigbo ozioma, nke ndi Pips na eme. Knight nwere onyinye asaa Grammy na ọtụtụ onyinye ndị ọzọ maka aha ya.
Otu Jamaica nke atọ ụwa mere emume ncheta afọ iri anọ na ise ya n’afọ gara aga. Na-akpọ onwe ha 'Reggae Ambassadors' ma na-akọwa ụda ha dị ka njikọta reggae, nke atọ ụwa mix reggae na ọtụtụ ụdị ndị ọzọ dịka mkpụrụ obi, funk, na disko. Ihe kacha emetụta ha n'oge a bụ 45 ugbu a na anyị hụrụ ịhụnanya. Ọganiihu ha ewetala ha n’ụwa niile ma tinye aha Grammy iri n’aha ha. Otu ohuru ha, ,hụnanya Gị Dị Mfe, bụ nke Damian Marley mepụtara ma wepụta ya n'afọ a.
Ndị Cuban Timba band Havana D'Primera guzobere Alexander Abreu na 2008, ndị otu egwu guzobere ìgwè ndị egwu na egwu egwu Cuban, na-agụkọ ndị otu 17 ọnụ. A na-ahụta Abreu dịka otu n'ime ndị ọkpọ ọkpọ kacha mma n'ọgbọ ya, ọ bụkwa onye maara ihe na-ede abụ, onye na-abụ abụ na ọga agha. Usinggba egwu na-ada ụda salsa, jazz, funk, na Afro-Cuban, ndị otu ahụ ewepụtala ọba egwu anọ ugbu a. Nke kachasị ọhụrụ bụ 2018 Cantor Del Pueblo, nke mere ka ha nwee nhọpụta Latin Grammy nke abụọ maka Best Salsa Album.
Aymée Nuviola, nke a na-akpọ 'La Sonera del Mundo', bụ onye ọbụ abụ a na-akwanyere ùgwù nke si Cuba nke zụrụ na Manuel Saumell Conservatory na Havana. Nuviola bụ otu n'ime ndị Cuban kachasị ukwuu taa, ọbụnadị o dekọtara abụ na akụkọ akụkọ America Jackson Browne. Dika nwatakiri onye na-egwu egwu Nuviola kwagara Miami ebe oru aka ya kwụsịrị. N'afọ gara aga, ọ ritere ihe nrite Latin Grammy nke mbụ ya maka album 2017 ya bụ Como Anillo Al Dedo.